मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजकोरोना नियन्त्रणबाहिर गएको भन्दै लकडाउन गर्न चिकित्सकको सुझाव
विराटनगर / नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको भन्दै चिकित्सकले तत्काल लकडाउन गर्दै नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरुमा कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका आइसियू र शय्या भरिएका छन् । शय्या भरिएपछि अस्पतालहरुले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको जनाएका छन् । दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणपछि पनि मानिसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको, भीडभाड हुने कार्यक्रम जारी राखेकाले सङ्क्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको उनीहरुले औँल्याएका छन् ।
सरकारले उपचारका लागि शय्या विस्तार गरे पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौति हुने स्थिति रहेको वीर अस्पतालका चिकित्सक डा. अच्युत कार्कीले बताए । सरकारले सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्न कम्तिमा दुई साताका लागि लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकले दिएका छन् । ‘अब कम्तिमा दुई साताका लागि लकडाउन नगरेमा नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन,’ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कोभिड उपचार संयोजन डा. विमल पाण्डेले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मापदण्ड पालना हुन नसकेपछि अर्को कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आइसकेको उनले बताए । नागरिक दैनिकमा समाचार छ
कोरोना लकडाउन सुझाव